Taliska ciidanka booliska oo soo saaray digniino cusub oo la xiriira Muqdisho | Goojacade
Home War Taliska ciidanka booliska oo soo saaray digniino cusub oo la xiriira Muqdisho
Taliska ciidanka booliska oo soo saaray digniino cusub oo la xiriira Muqdisho
Taliye ku xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Zakiya Xuseen Axmed ayaa soo saartay digniino ku wajahan shacabka iyo bahda warbaahinta Muqdisho.
Taliye ku xigeen Zakiya, ayaa sheegtay in shacabka iyo bahda warbaahinta ay kaga digeyso inay ku cararaan meelaha ay ka dhacaan qaraxyada Al Shabaab ka fuliyaan magaalada Muqdisho.
Waxay sidoo kale sheegtay in laamaha amaanka ay warbaahinta iyo shacabka u ogolaan doonaan inay tagaan meelaha qaraxyada ka dhacaan, marka ay xaqiijiyaan in goobta qaraxyo kale aan la dhigin si loogu dhibaateeyo Shacabka.
Waxay tilmaamay in magaalada Muqdisho marar badan ay ka dhaceen in dadka qaraxyada ku xooma lagu laayo qaraxyo kale oo lasii dhigay goobta qaraxa koowaad uu ka dhaco, sida ay sheegtay.
“Waxaan dhamaan shacabka iyo bahda warbaahina u sheegeynaa inay ka fogaadaan meelaha qaraxyada ka dhacaan, ilaa laamaha amaanka ka xaqiijiyaan in meesha amaan tahay, waad og tihiin qatarta ka dhalan karta qaraxyada labaad”.
“Waxaan idinku wargelineynaa warbaahinta iyo shacabka in ciidamada aysan ogolaan doonin in goobaha qaraxyada ka dhacaan lagu soo yaaco, ilaa aan ka xaqiijino in goobta uu yaalo ama uusan oolin qarax labaad”ayay tiri Zakiya.
Tusaalooyin ayay usoo qaadatay marar badan oo Al Shabaab ay qaraxyo labaad ku laayeen dadka ku xooma meelaha qaraxyada koowaad ay ka dhacaan, waxaana kamid ah weerarkii ka dhacay Hotel Saxafi sanadkii hore oo ugu yaraan seddex gaari oo meelo kala duwan la dhigay loo adeegsaday.
Previous articleSomaliland: Ganacsade Axmed Geelle waxaa raadinaya Booliska Aduunka
Next articleCiidamada Dawlada oo la wareegay degaano cusub